Unokunyamekela njani ulusu ngexesha lokukhulelwa?
Ngenxa yokuba abaninzi abafazi abakhulelweyo bayesaba kakhulu "ukugijima" ngexesha lokukhulelwa, kufuneka baxinzelele ukugcina isibalo ngaphandle kwamanqatha amaninzi, amancinci amancinci kunye azinyulisiweyo, kwaye ubuso bubushushu kwaye buhlambulukile.
Ngelishwa, akunakwenzeka njalo ukuba abatsha abaza kuba ngomama bakwazi ukuzinyamekela ngempumelelo, kodwa kukho iindlela ezintle zokugcina ulusu ngendlela enhle. Yimalunga nendlela yokunyamekela ulusu lobuso ngexesha lokukhulelwa kwaye siya kuthetha.
Iingcebiso zokunyamekela kwesikhumba okanye indlela yokugcina ulutsha, ukutshabalalisa nokunyamekela kwesikhumba ngexesha lokukhulelwa.
Ukususela ngexesha lokukhulelwa kuwo wonke umzi womfazi kukho ukutshatyalaliswa kweentlobo ezahlukeneyo, ukunyakaza kwama-hormonal kunye ne-glitches kubonakala kakhulu kwesikhumba. Kwabesetyhini abathile abakhulelweyo, olo tshintsho kwi-physiology luncedo, ingakumbi kubasetyhini abanomzimba onqabileyo wesikhumba. Kwesinye iimeko, ngenxa yokubunjwa kwama-estrogens amaninzi, ulusu luba lumile kwaye luhlale lubomvu. Ukuyicombulula le ngxaki, kufuneka uqaphele izimonyo ozisebenzisayo ngaphambi kokukhulelwa. Kufanelekile ukujonga nokuhlengahlengisa, ukuzalisa isikhwama sakho sokuzicoca kunye nazo zonke iindlela eziyimfuneko. Ukuze ususe umphumo wokubumba kunye nokwenza umbala ococekileyo, kufuneka uthenge ukhilimu ophuculisayo, kunye nequlethe izicatshulwa ezahlukeneyo zemifuno kunye neoli. Eyathandwa kakhulu ngaphambili kwimarike yehlabathi, uMary Kay uvelisa ama-creams ahlukeneyo, kunye nokudibanisa kwe-seaweed, i-bex ne-exotic oil oils, ebangela ukuba kusebenze umsebenzi we-intracellular. Faka isicelo sikhilimu ebusweni bakho ubuncinane ngamaxesha amaninzi ngemini (ngaphandle koko awuqapheli umphumo). Musa ukulibala ukuba kufuneka wenze amaxesha amaninzi ngeveki, isiski somzimba esondayo. Kukho ukhilimu omtsha ovela kwi-AVON yenkampani, eya kukunceda ukulahla izibonda ezimnyama ezantsi kwamehlo.
Nangona uyazi imigca ethile yeziqholo, musa ukulibala ukuba ekulindelekeni kwengane awukwazi ukuzama ukungazifumani umgca weendlela zokuzilungisa ezingenziwayo.
Ungakulibali ukuba ezinye izimonyo zingabangela ukuphazamiseka ngokukhawuleza (nangona ungenayo i-allergies kule mpendulo), ngoko uzama ukujonga umkhiqizo kwincinci encinane ngaphambi kokuba usebenzise.
Inkathazo eqhelekileyo ngexesha lokukhulelwa kwabasetyhini abaninzi, ukubonakala kwamabala e-pigment kwizihlathi. Vumela le ngxaki yesikhashana, ekubeni i-pigmentation iyanyamalala emva kwexesha elithile emva kokunikezelwa, kodwa ufuna ukukhangela ngexesha lokukhulelwa. Isiqalo sokuqala, kufuneka uzame ukuhlala kangangoko kunokwenzeka elangeni. Kodwa ukuba le nto ayinakuphetshwa, ikhambi lokuqala lilokhuni. Akugcini nje kuphela ukukhusela ulusu kwimisindo ye-ultraviolet, kodwa livala "ingxaki" kwindawo zesikhumba. Abahlambululi bezokhumba banempembelelo ejulile kuyo, kodwa kufuneka baphathwe ngokucophelela, ezinye zazo ziqulethe kuphela izitshalo. Iingcebiso ze-cosmetologist engcali nezobuchule ziya kuba luncedo kakhulu xa ufuna ukwazi ukunyamekela ulusu lomntu ngexesha lokukhulelwa.
I-silhouette enhle kwaye epholileyo iyingxaki kubamama abaninzi abalindeleyo.
Inkwenkwe ikhula kancane kwisibeleko, kwaye ngokukhula kwayo, ubunzima bomama buyanda. Utshintsho olunjalo olubukhali kulo mfanekiso alusoze lwabonakala. Ikhumba lombutho wonke wesibhakabhaka kuqala kwindawo eyingozi. Ukuthintela ulusu ukuba "lusuke" kwaye lunike amandla, iifomu efanelekileyo kukusebenzisa izimonyo eziphuculisayo kunye nesikhumba. Okukhethiweyo kuhlukeneyo: iigel kunye nama-creams kwi-shower, kwaye kukulungele ukusebenzisa ioli ye-cosmetic, ukuyihlamba emzimbeni imihla ngemihla. Ngale ndlela uza kuqinisekisa ukuba ulusu lugcina umswakama kwaye luphucula ukubonakala kwalo. Okwangoku uyathandwa ngumntwana kaYohsonson oyile. I-Cellulite yenye yeengxaki eziqhelekileyo zesikhumba sabasetyhini. Nge "peel orange" kufuneka ukulwe ngokungqongqo, njengoko iintlobo ezingekho phantsi kwe-cellulite zingakhokelela kunyango lwangexesha elide. Ngoko ke, umntu akafanele azame ukusindisa kwizonyango zobugcisa. Kwezinye iinkampani zonyango, kukho imveliso eyahlukileyo yokulwa nomphumo we "peel orange".
Ezi zihlunu ezimbi kwaye ezimbi, zenzani nazo?
Okokuqala, ukucinga ngale ngxaki kuphela emva kokubeletha. Emzimbeni womfazi ngexesha lokukhulelwa, kukho ukwanda kwemisebenzi ye-hormonal, ekhokelela ekuphuleni ukuhlanganiswa kwe-fibroblasts. Ikhumba ngokukhawuleza lilahlekelwa ukunyaniseka kwayo, ingakumbi kwiindawo ezinobuthakathaka (isisu, isisu, esifubeni), ngoko kukho izikrakra. Umbala wabo uhluka ukusuka obomvu ukuya kumhlophe. Abasetyhini abaninzi banelungelo lokutshintshwa kwesikhumba, kuba yonke into eyenziwa ngumfazi okhulelwe iyancipha kakhulu nawuphi na uhlobo lwe-rearrangements e-hormonal. Kuyafaneleka ukuthembela kuphela kuwe! Zama ukunyamekela ngakumbi ubunzima obongezelelweyo, ngaphantsi kokutya ukutya kwe-carbohydrates, iiskese kunye nemveliso yefriji. Kungcono ukutya imifuno, iiprotheni, ngenxa yokuba kubongwe kubo, i-collagen iphinda ikhiqizwe. Sincoma kwakhona ukuthengwa kwebrush massage kunye nejel, okufuneka ifake izondlo, i-silicone kunye nezinto ezinokuhluma. Musa uvila ekuseni kwaye ukuhlwaya kwesikhumba.
Kwiinyanga ezidlulileyo zokukhulelwa kwakho, uninzi lomthwalo uya ezinyaweni zakho. Ubunzima bomzimba wakho budala ukukhukhula okuqinileyo. Abasetyhini abaninzi ngeli thuba lexesha kwaye emva kokukhulelwa bahlanjululwa yimivilini ye-varicose, apho iindawo zokuhlamba ezinyawo ezizodwa zikunceda gqitha. Emva kokuhlambela oku, uza kuziva ulula, ulusu luya kuncenga, kunye negazi liya kuhamba ngokunyanisekileyo kwimithambo yegazi. Ukuthintela imithanjeni ye-varicose, iigels ezikhethekileyo kunye neeprafu kufuneka zisetyenziswe. Iinyawo zakho ziya kukubulela kakhulu, kwaye kuya kuba lula ukuhlala.
Unako ukugcina uluhlu lwamagama ahlukeneyo ixesha elide, kodwa ukhetho lenu. Kufanelekile ukuqwalasela iingcebiso ze-beauty dress, ukuthembela ngcebiso lakhe elisebenzayo, ngoko isikhumba sakho somzimba nomzimba uya kukukholisa ngokukhawuleza. Ungalibali ukuhlala usebenza emzimbeni wakho. Impilo kunye nobuhle bakho buya kuhlawula yonke imali esetshenzisiwe kuzo!
Iintlawulo ngexesha lokukhulelwa nangemva kokubeletha
Unxibelelwano lomama nomntwana omncinci
Ukutya okunempilo ngexesha lokukhulelwa
Kutheni ufuna ukusela i-magnesium B6 ngexesha lokukhulelwa?
Ukuzivocavoca izidumbu zeeplavis
Ukugqithisa ngokwexesha lokukhulelwa kwaye emva kokubeleka
Ukujonga kakuhle xa ukhulelwe
I-Palmistry: Izibonakaliso kwisandla esichazela ulonwabo
Ukufumana isisindo somzimba ngexesha lokukhulelwa
Umoya womama ekuphuhlisweni komntwana
Umlingisi uNonna Mordyukova, i-biography
Unyana u-Ingeborga Dapkunaite: umdlali oneminyaka engama-55 ubudala wayenomntwana
Iyintoni imibala emithathu yeenwele?
Isonka esiyidlayo siyingozi?
Indlela yokwenza umntu azi ukuba akafunanga
Uthando lwamahhala kweli hlabathi lanamhlanje
Ukuqala ngesondo emva kokuthandana
Ziyingozi ukusetyenziswa ngokweqile kweswekile
Isaladi yesikrakra kunye neentonga zesikhumba
I-Horoscope yenyanga kaDisemba, iSagittarius
Amacebiso ukuba intombazana ithanda umfana
Unyango lwamayeza oluntu olwenziwe kwizithende